News - Mechanical akara echichi
Ntinye usoro ihe eji arụ ọrụ
Ntinye oru Mechanical
Usoro ntinye nke akụrụngwa akụrụngwa dịgasị iche iche na ụdị nke igwe na ụdị igwe, mana ihe nrụnye dị mkpa fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu. Mechanical akara bụ otu n'ime ihe ndị bụ isi n'ibu mmiri na nkenke na mgbagwoju Ọdịdị. Nwụnye nzọụkwụ na-akpachapụ anya dị ka ndị a:
1. Mgbakọ nke akụkụ nke arụmọrụ akara:
a. Wụnye ntụtụ ntụgharị ntụgharị n'ime oghere kwekọrọ nke mkpuchi mkpuchi akara;
b. Etinye static mgbanaka akara mgbanaka na static mgbanaka, wụnye static mgbanaka n'ime akara ọgwụgwụ mkpuchi, na ntị ka ime mgbochi adiana pin tinye uzo nke static mgbanaka. Mgbe ị na-etinye gland, attentionaa ntị ka ị ghara ime ka mgbanaka ahụ na-emetụ osisi ahụ aka - a ga-eme ka mkpọchi ahụ sie ike n'ọtụtụ oge.
2. Mgbakọ nke na-agbagharị n'akụkụ nke akụrụngwa akụrụngwa: kpọkọta akụkụ ndị na-agbanwe agbanwe nke mekaniki akara na aro ahụ n'otu n'otu dị ka usoro ahụ si dị. Ọ bụrụ na e nwere ogwe aka, a ga-agbakọta akụkụ ndị na-agbanwe agbanwe nke akụrụngwa na-atụgharị aka na aka ahụ, mgbe ahụ, a ga-etinye eriri ahụ na akụkụ ntụgharị nke akụrụngwa na eriri.
3. Wụnye mkpuchi ngwụcha na akàrà ahụ wee jiri kposara ya sie ike.
4.Ma ule disk dị mfe, ọ bụrụ na diski anaghị agagharị ma ọ bụ sie ike, lelee ma nha mgbakọ ahụ ziri ezi. Nwụnye usoro:
(1) Lelee ma ihe nlereanya ahụ, nkọwapụta na akụkụ nke akụrụngwa akụrụngwa a ga-arụnye ziri ezi.
(2) Lelee ma ihe niile nke mekaniki akara mebiri emebi, karịsịa ma ọ bụ akara ọgwụgwụ ihu nke na-akpụ akpụ mgbanaka na static mgbanaka mebiri emebi. Ọ bụrụ na achọta mmebi ọ bụla, mezie ma ọ bụ dochie akụkụ ọhụụ. A ga-ehichapụ mmanụ akụrụngwa niile mmanụ mmanụ ma ọ bụ manu oku iji mee ka ihe ndị mejupụtara ya ghara ịnụ ntụ na ihe ndị si mba ọzọ.
(3) Ma enwere akara na akara akara n'elu oghere ma ọ bụ aka uwe, mgbidi dị n'ime nke oghere na akara nke mkpuchi mkpuchi. Ọ bụrụ na achọtara burr ma ọ bụ ahịhịa ọ bụla, ekwesiri ịhazigharị ya, mee ka ọ dị ọcha, jiri mmanụ ụgbọala ma ọ bụ manu oku hichaa ya, ma jiri mmanụ gauze dị nro na nke dị nro, hichaa ya na owu na ihe ndị ọzọ. Iji mee ka ọ dịkwuo mfe ịwụnye, a ga-etinyere mmanụ n'elu ogwe ma ọ bụ aka uwe na oghere dabara na gland na mgbanaka akara iji zere esemokwu akọrọ n'oge ịmalite.